Sidee Rooble ku kasban karaa Kalsoonida Mucaaradka? | KEYDMEDIA ONLINE
Sidee Rooble ku kasban karaa Kalsoonida Mucaaradka?
Wuxuu Rooble dhawaan qaadey tallaabooyinka lasoo dhaweeyay, oo ay kamid yihiin inuu Ciidankii ka gadoodey muddo-korarsiga Farmaajo ka saarey Muqdisho iyo ku dhawaaqista Shirka May 20.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaa horyaalla caqabado iyo fursaddo uu ku kasban karo quluubta mucaaradka iyo Shacabka.
Si uu u kasbado kalsoonida dhamaan saamileyda siyaasadda, Rooble waxaa looga baahan yahay inuu qabtaa wadahadallo loo dhan yahay, inuu la wareeggo si buuxda Mas'uuliyadda dalka, gaar ahaan hanaanka doorashadda iyo amniga.
Rooble waxaa sidoo kale kalsoonida shacab iyo mucaaradka ku heli karaa inuu ka madax-bannaanaado Farmaajo iyo Kooxdiisa uu Fahad Yaasiin hogaamiya, taasoo xumeynaysa sawirka iyo aragtida laga qabo hogaamintiisa.
Ku guuldareysiga inuu wadanka gaarsiiyo doorashooyin xor iyo xalaal ah, oo waqtigooda ku dhaca ayaa wiiqi doonta geeddi-socodka ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya, kaasoo aan cago-badan ku taagnayn, waxayna keeni kartaa inuu dalka dib ugu laabto colaad iyo fowdo.
Rooble si kastaba ha noqotee wuxuu ku dhaqaaqay tallaabo la bogaadiyay, isagoo ku dhawaaqay wadahadal u dhexeeya dowladda iyo Maamullada, kaasoo loo qorsheeyay 20-ka May, lama oga inay Musharixiinta ka qeybgali doonaan, maadaama casuumadda aan lagu sheegin.
Durba qaar badan oo Mucaaradka kamid ah iyo Beesha Caalamka, ayaa amaanay sida uu u maareeyay ka-saarista Ciidamada Badbaado Qaran Muqdisho iyo ujeedkiisa inuu la kulmo xubnaha dowladda dhaliilsan.
Saaxiibada Beesha Caalamiga, sida Mareykanka, Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, IGAD iyo Midowga Afrika, waa inay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa taageerada dedaallada socda ee ku aadan doorashooyinka Soomaaliya.
Dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya dhankooda waxaa looga baahan yahay inay la yimaadaan tanaasul siyaasadeed oo ka yimaada qalbiga, si looga badbaadiyo dalka inuu markale lugaha la galo dagaallo ka dhasha loolanka awoodda iyo kursiga.